Dhaqaale loo raadinayo shacabka Suuriya - BBC Somali
Dhaqaale loo raadinayo shacabka Suuriya
4 Febraayo 2016
Image caption Shacabka Suuriya ayaa dhibaato badan ka dhaxlay colaada dalkaasi.
Shir dhaqaale loogu ururinayo Suuriya ayaa maanta ka furmaya magaalada London, ayada oo shalay uu burburay kulankii ay Qaramada Midoobay qaban qaabisay ee lagu doonayay in lagu soo afjaro colaada ka socota dalkaasi.
Shirka maanta ayaa la doonayaan in lagu ururiyo lacag dhan 9 bilyan oo doolar.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in ay bixin doonto bilyan iyo 750 oo kun oo doolar, lacagtaasi oo lagu kharash gareyn doono gudaha Suuriya iyo dalalka deriska la ah ee ay ku nool yihiin malaayiinta qaxootiga ah ee ka barakacay dalkaasi.
Ra’iisul wasaaraha Britain, David Cameron, ayaa sheegay in lacagtaasi ay dadka siin doonto rajo iyo in ay ka joogsadaan safarada khatarta badan ee ay kusoo aadayaan Yurub.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Norway, Borge Brende, ayaa ka digay in jiil dhan uu dhumi doono haddii uu guuldareysto shirka maanta.
Waxaa la filayay in hormar laga sameeyo dadaalka lagu soo afjarayo colaada Suuriya, balse markii uu hakaday kulankii Geneva, ayaa waxaa dowladaha Suuriya iyo Ruushka lagu eedeeyay in ay doorbidayaan xal milateri.